Osaziwayo, yebo, benza konke abangakwenza ukuze abe muhle, kodwa hhayi zonke izimpahla zazo kungaba ekuyigxiliseni. Fashion ushintsha ngokushesha okukhulu. Namuhla, kukhona into entsha, futhi ukhohliwe kakade ngosuku olulandelayo. Kodwa kukhona izingubo ukuthi ngeke kulibaleke, ngaphezu kwalokho, sibonga kubo ukudala imodi indaba. Ake abanye wokujikeleza isikhathi ukubheka 15 izingubo ezinjalo, kanye nalabo ngenxa bani benzile umlando.
Lesi sithombe sathathwa ngo-1957. Neckline ingubo benza Dzheyn Mensfild undab 'uzekwayo. Njengoba ubona kusukela photo, edonsela hhayi kuphela imibono abameleli ubulili namandla.
ingubo inyama anemibala kwaba brilliant Marilyn Monroe ngesikhathi ingoma "Happy Birthday" ukuze Dzhona Fitsdzheralda Kennedy ngo-1962. Kwathatha isikhathi esingaphezu kwengxenye yekhulu leminyaka, kodwa ingubo sisenjalo namanje evelile. Uma othile uzigqoka namuhla, uzoqhubeka ukubheka emangalisayo nemfashini.
Meri Tayler Moore
Meri Tayler Moore ngokuqinisekile kwashaqisa umphakathi le ingubo evulekile eliluhlaza isizini wesihlanu show yakhe ngo-1975.
Akungabazeki Madonna - Queen igqoka ihlazo, futhi ngomunye wabokuqala kwaba ingubo encane lomshado ukuthi babegqoka kuvidiyo ingoma yakhe Like A Virgin ngo-1984.
Le dress langa Cher kwaba ngesikhathi isethulo "Oscar" ngo-1988. Ngokuqinisekile, yena wayefuna ukuhamba ivelele, futhi singasho ngokuqiniseka ukuthi wakwenza.
Lo mlingisi wabheka emangalisa kule dress emcimbini "Oscar" ngo-1989. nangezindlela Igolide phezu ingubo kugcizelelwe engilakhele isithunzi sobukhulu sibalo sakhe, futhi iCape okhalweni uye nakanjani ungeze idrama kancane.
Lokhu ubuhle iyakwazi ukuba amehlo futhi uqiniseke ukuthi ezungeze waphenduka ngemva kwakhe. Ingubo ebomvu nge neckline ongaphakeme okuyingozi, okuyinto babegqoka ngo-1991, Sindi Krouford wabheka nje fabulous.
Diana egqoka le ingubo, ngemuva kokuthi uPrince Charles wavuma ukuthi ekhohlisa endabeni yakhe. Wabe usubizwa ngokuthi i- "yokuziphindiselela ingubo", futhi kuyacaca ukuthi kungani. The dress wanamathela Curves ka Diana indlela ephelele kakhulu.
Akhuleka abalandeli eziningi umculi yawenza ngubo sexy yesikole kuvidiyo yakhe ngoba Baby One Time ngo-1998. Kusukela ngaleso sikhathi, isithombe laba yisakhiwo sodumo. Futhi uma omunye usebenzisa timphahla tekubhukusha Halloween, wonke umuntu uyazi ukuthi ngeke okomunye yesikole, futhi Britney.
Toni Braxton ubelokhu kule dress ngesikhathi isethulo "Grammy" umklomelo ngo-2001. Ngubo, yebo, kungaba uyibize ngokuthi ingubo, kungcono kakhulu njenge-emapheshana osendaweni ibekwe indwangu. Kodwa lokho eniyakukusho, futhi bheka kungcono awusoze walibaleka!
Le dress omangalisayo nenhle oluhlaza kwaba ngezinye Kire Naytli ku melodrama "Lokubuyisana", wathwebula 2007. Kusenzima njengelinye lamazwe izingubo amahle kakhulu e-movie.
imigqa Simple futhi ngomusa ingubo ngalé lomshado Pippa Middleton, udade osemusha ka Ketrin Middlton, wamenza omunye yisakhiwo sodumo kakhulu futhi zikanokusho.
Dress okuyinto nesibindi ukubeka Ember Rouz emcimbini Isiqophi Music Awards 2014, ushiya ikamelo elincane ngoba ukuceba, kodwa, niyabo, ihlanganisa zonke izindawo "osendaweni ezibalulekile".
Rita Ora futhi Bella naseHadidi
Kuyadingeka ukuba umzimba ophelele futhi eziningi ukuzethemba ukugqoka lokhu ingubo. Rita Ora futhi Bella naseHadidi oqaliswe amantombazane! Futhi izibukeli kuphela ukwahlulela ngalo bahamba phezu ingubo.
Kim Kardashian sibonwe kule isudi elimhlophe Miami. Phezulu senziwa ngesimo isitembu nge neckline ngokujulile futhi "flow phansi" kusukela emahlombe imikhono, ukuthi kuyafana umfanekiso Disney Princess. Ingxenye engezansi ifana leggings elula. Lo is impela i ngubo engavamile, kodwa Kim uhlale ezingalindelekile uma kuziwa imfashini, futhi kuwo ungalindela noma yini.
Factory Kalyaeva: Izibuyekezo ikhasimende
Izimpawu Ihambisana: Aquarius futhi Sagittarius